Ubuntu, say what? — MYSTERY ZILLION
Ubuntu, say what?
December 2008 edited December 2008 in Ubuntu
Ubuntu (pronounced oo-BOON-too) isaZulu word that translates to "humanness."
Used asaverb, Ubuntu describes the practice of respecting one's family and neighbors вЂ” or more broadly, the community at large.
At its core, Ubuntu means that the members ofacommunity take care of each other and the community itself. The creators of Ubuntu Linux took this philosophy of commitment to community to drive their creation. Ubuntu Linux (many people pronounce it LIN-icks) is designed for the community of Linux users вЂ” all of us.
Ubuntu for Dummy ထဲကတွေ့လို့ကူးလာတာ။ အဲဒီစာအုပ်ကို အောက် File Request Threat မှာ ဒေါင်းပြီးဖတ်လို့ရတယ်။
MZ က fri တွေက Ubuntu ကိုတော်တော် ကြော်ငြာကြတာပဲ ... :5:
Ubuntu အချစ်တော်တွေ ...... :71:
Alexander ကခုထိ Ubuntu မသုံးဖူးသေးဘူး။ Linux ကို Red Hat ပဲသုံးဖူးတယ်။
Yangon ပြန်ရောက်ရင် Ubuntu install ပြီးသုံးကြည့်ဦးမယ်။ :67:
Alexander က ခု ဘယ်ရောက်နေလို့လဲ .. (စပ်စပ်စုစု ) :103:
ကိုAlexander ကအခုမော်ကျွန်းမှာဗျို့။ သူ့Signature မှာရေးထားပါတယ်။
အော် ဦးဘွန်တူ ကျနော်လဲ သွား၀ယ်လိုက်မယ်. အဲဒီ ဦးဘွန်တူကြီးကို
အော် မော်ကျွန်းမှာလား .. ကျနော် မရောက်ဖူးဘူးဗျ။
လာခဲ့ ... လာခဲ့ ... မော်ကျွန်းမှာ ... Alexander ရယ် . PawPaw ရယ် MZ က နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ နှစ်ယောက်လုံး UNICEF က။
မော်ကျွန်းက Nargis affected Village တွေကိုလိုက်ပို့ပေးမယ် ... :6:
ဟ .. နှစ်ယောက်စလုံးက NGO မှာလုပ်နေကြတယ်လား ဂုဏ်ယူစရာပါ ကိုAlexander။
ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျား။ :103:
UNICEF က NGO ဟုတ်ဖူး ....... UN ပါ။ :P
United Nations Children's Fund ( ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရံပုံငွေ အဖွဲ့ )
ခုတော့ Ygn ခဏပြန်လာမလို့ ... သောကြာ .. စနေ .. တနင်္ဂနွေ ( 6,7,8/12/08 ) ...... ၃ရက် Yangon ပြန်လာမှာ ... လိုချင်တာတွေ တပုံကြီး၀ယ်ပြီး မော်ကျွန်းပြန်မှာ ....
UNICEF ကိုတော့ UN မှန်းတော့ သိတယ်။ ကျနော် အဲဒီ UN ကို Non-government Organization လို့ထင်မိသွားလို့ပါ .. :P ..
ကျောပို့အိပ်လေးနဲ့ မဆန့်မှာ သေချာလို့ :P
ဟဲ့ အလကားရတဲ့ ဟာလေ။ ဘာလို့ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ချင်နေတာလဲ။ ငါနှယ့် ခက်တာပဲနော်။ )
အလကား ရလို့ အားလုံး တစ်ဘူထဲ ဘူနေကြတာပေါ့ဟဲ့။ ပိုက်ဆံပေးရလို့ကတော့ အကုန်လုံး ပွစိ ပွစိ လုပ်ကုန်ကြမှာ သေချာတယ်။ :d
mm_legend က ညဏ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်
Ubuntu က အလကားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့ CD/DVD က ကျတော့၀ယ်ရတယ်လေ။
ကိုယ့်မှာ Internet connection ကနှေးပြီး download လုပ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါ CD/DVD ၀ယ်ရတာပေါ့။ အဲ အဲဒီ CD/DVD burnt ပေးတဲ့သူကလဲ သူက Internet connection ကြီးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ချိတ်ထားရတာကြောင့် အဲဒီအဖိုးအခတွေတော့ အဲဒီ CD/DVD ပေါ်ပေါင်းထည့်ပြီး ယူအုံးမှာပေါ့။
Ubuntu ရဲ့ Service ကိုမ၀ယ်ရင် ပိုက်ဆံပေးစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ Red Hat ကပဲဖြစ်ဖြစ် OpenSUSE, Mandriva ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သူ့တို့ Service ကို မယူဘူးဆိုရင် အားလုံးအလကားပါပဲ။ Open Source ဖြစ်နေတာကိုး။ ကိုယ်ကြိုက်သလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး build လုပ်ပြီး distribute လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် OpenSource ဆိုတဲ့အတိုင်း နောက်ပြီး GNU General Public License အောက်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်း အမြဲတမ်း Free and Freedom ဖြစ်နေမှာပါ။
ရော့ဒါ နီးစပ်ရာနေရာကနေ စွဲနိုင်ဖို့ ဆာဗာလိပ်စာတွေကို ဒေသနဲ့တစ်ကွထည့်ပေးထားတယ်။
ကိုmm_legend ရေ သူ့တို့ရဲ့ ubuntu website မှာလဲ ကိုယ့်နဲ့နီးရာ mirrors ကနေ download လုပ်လို့ရအောင် "Please selectalocation" ဆိုပြီးပေးထားပါတယ်။ အလိုရှိတဲ့နေရာကနေ download လုပ်လို့ရပါတယ် ခင်ဗျား။
ဒါဆိုရင်လဲ Red Hat အကြောင်းကိုပြောပြပါဦး။ ေ၀မျှပါဦး။ ဘာတွေထူးခြားလဲ window နဲ့ပေါ့။
ပြီးတော့ ubuntu ကိုလည်းစမ်းသုံးကြည့်ဦးပေါ့။ ထူးခြားတာတွေကိုလဲ ပြောပေးပါဦး။
ကျနော်လို အသစ်လေးတွေ အတွက် Ubuntu Linux for Dummies စာအုပ်ပါ။ ကျနော်လည်း ဖတ်နေတုန်းပါခင်ဗျ။ command line သဘောကို နားမလည်ရင် ဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
စာအုပ်ကို upload ပေးတဲ့ ကိုကျော်မင်းကို လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဒီအတိုင်း ကလိကြမယ့်အစား၊ စာအုပ်လေး ဖတ်တော့ ပိုပြီး ယုံကြည်မှူရှိရှိ နဲ့ ကလိလို့ရတော့ပေါ့ဗျား။
ဥပမာ။ ။ အများစုက ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတာနဲ့ ဝင်ဒိုးအသုံးပြုနည်း သင်တန်းတတ်ကြတယ်လေ။ အဲဒီလိုပဲပေါ့၊ အရင်ဆုံး သင်ပြီးမှ သုံးတာကောင်းတာပေါ့။(သင်ဆို ကိုယ့်ဘာသာစာအုပ်ဖတ်တာလဲ သင်ယူတာပဲလေ။)